Matoa nahitana faty olona amina fetim-pirenena, tany ivelany, dia vokatry ny fampihorohoroana. Ny eto Madagasikara anefa ireo olom-pirenena no mifamono mifanosika, ary tsy voafehin’ny mpiandraikitra filaminana sivily sy miaramila. Tsy ny lanonana ara-panjakana eto an-drenivohitra irery anefa fa na ireo fampisehoana any amin’ny faritra aza dia ahitana io tranga io. Tsiahivina fa nisy ny naratra tamin’ny fitsenana Barea, ny faran’ny herinandro teo.
“Nilamina amin'ny ankapobeny ny fitsenana ny Barean'i Madagasikara. Olona miisa telo no nentina teny amin'ny Hjra noho ny ratra madinika nahazo azy ireo vokatry ny hafanam-po sy ny fifanosehana tamin’ny fitsenana ny ekipam-pirenena. Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy moa ireo olona ireo ka efa lasa nody avokoa”, araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.
Heverin’ny mpanara-baovao fa tsy voafehy hatrany ireo fahavoriam-bahoaka. Ankoatra ity faharatrana olona telo tamin’ny sabotsy teo ity, sarotra hadinoina ireo 17 nindaosin’ny fahafatesana sy am-polony maro naratra mafy, tamin’ny 26 jona teo. Ny mpitolona hatrany no heverina fa voafehin’ny tompon’andraikitry ny filaminana eto amin’ny Nosy. Mampiaiky ireo mpanara-baovao aza ny fanosehana ireo mpitokona, miampy ny fanapoahana etona mandrotsa-dranomaso ho an’ireo mpitaky ny fahamarinana sy fahafahana fa tsy misy ny maratra amin’izy ireny.